Archive du 20181217
Fifanatrehana farany Very lavitra Rajoelina
Nambaran’i Marc Ravalomanana nialohan’ny adihevitra tamin’ny haino aman-jerim-panjakana, fa mahita fitanilana ataon’ny minisitry ny atitany izay marihina fa amin’ny MAPAR izy araka ny zavatra hita tany Fianarantsoa, Farafangana,…
Kara-pifidianana maro be sarona Tena hisy ny hala-bato
Nisy andian’olona tratra ary niaiky sy nijoro vavolombelona fa niasa nanao mpikarama an’ady tamin’ny tetika fangalaram-bato, ka kandida filoha iray mbola miatrika ny fihodinana faharoa no mpaniraka sy mpanakarama azy ireo.
Mponin’ny faritra iva eny Ampefiloha Nirary soa ny kandida Marc Ravalomanana
Ny zoma teo no nanatanteraka hetsika ho fanamarihana ny tsingerintaona nahaterahan’ny kandida ho filoham-pirenena, laharana faha-25, Marc Ravalomanana ny mponina tetsy amin’ny faritra iva Ampefiloha.
Andry Rajoelina Efa nanao veloma ireo mpomba azy
Ny sabotsy hariva vao niparitaka ny feo fa hanao faradoboka eto Antananarivo ihany ny kandida laharana faha-13 Andry Rajoelina. Ny alin’io vao nalefa ny antsoantso tamin’ny haino aman-jery ny hanatanterahana izany.
Tence Mena “Avy amin-janahary ianao Dada Ravalomanana a !”
Ny marainan’ny faradoboka ny sabotsy 15 desambra lasa teo no namoronan’ny mpanakanto Tence Mena Tononkalo ho an’ny kandida laharana faha-25 Marc Ravalomanana.
Hita taratra ny fifohazan-tsaina Hitombo be ny vaton’i Dada any amin’ny Faritra
Tena hitombo ny vaton’ny K25 any amin’ny faritany. Io no ho vokatry ny fanohanana maro be, ary tsy hoe mpanao politika ihany fa hatramin’ny artista, mpanao fanatanjahantena,…
Kara-panondro sy kara-pifidianana mampiahiahy Manazava ny tranoprintim-pirenena
Nivoaka tamin`ny fahanginany manoloana ny toe-javatra misy eo amin`ireo kara-panondrom-pirenena sy kara-pifidianana hosoka izay niparitaka manerana an`i Madagasikara ny tranoprintim-pirenena.
Taratasin’I Jean Jean ilay Mpandresy
Mankasitraka Jean a ! Tsy misy hisalasalanay intsony fa tena marina ilay tenin’i Tense iny e ! Ianao ilay tena izy. Tena ianao rangahy ilay hitondra eto an-tanàna eto a !
Groupe VIDY VAROTRA Namaly fitia ireo zanaky ny mpiasa afa-panadinana
Toy ny fanaony isan-taona dia namaly fitia ireo zanaky ny mpiasa afa-panadinam-panjakana tamin’ity taona 2018 ny Vondron’orinasa Vidy Varotra tarihin’ny filoha tale jeneraliny Atoa Tahiana Razafinjoelina.
Fitotongan’ny harena voajanahary malagasy Mila fanajariana tontolo iainana, hoy ny HEHM
Nambara tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny Cemes Betongolo ny zoma teo ny fitsanganana ara-panjakan’ny rafitra tsy miankina miaro ny tontolo iainana na ONG HEHM.
JCI Antananarivo Voafidy ny birao vaovao hitantana amin’ny taona 2019
Voafidy ny faran’ny herinandro teo ny birao vaovao hitantana eo anivon’ny fikambanana JCI Antananarivo mandritra io taona vaovao 2019 ho avy io.
EKAR Md Josefa Mahamasina Miatrika fotoan-dehibe 3 tamin’ity volana desambra ity
.Fotoan-dehibe 3 sosona no natrehan’ny Ekar Md Josefa Mahamasina tamin’ity volana desambra 2018 ity.
Rugby Fanohanana ny K 25 Lasan’ny XV Family sy Tfma ny 3 tapitrisa ariary avy
Tontosa tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina omaly alahady 16 desambra 2018 ireo famaranana tamin’ny lalao Rugby nokarakarain’ny fikambanana Madagasikara Tafaray tarihan’ny
Tompondakan’ny Kick Boxing 2018 Notoloran’ny filohan’ny Federasiona 1.000.000 ariary avy
Mpikatroka niisa 79 avy amin’ny ligim-paritra 10 amin’ny 14 misy eo amin’ny taranja Kick Boxing Malagasy no niatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara 2018 eo amin’ity taranja ity (Low kick sy K-1) nandritra ny 3 andro nisesy 14,15,16 desambra 2018 tetsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina Antananarivo.
Amboaran’ny CAF 2018 Lavon’ny Kaizer Chiefs 3-0 ny Elgeco Plus
Lavon’ny ekipan’ny Kaizer Chiefs Afrika Atsimo 3-0 ny Elgeco Plus Malagasy tamin’ny sabotsy 15 desambra 2018 eo amin’ny lalao 1/32-ndalana mandroso amin’ny fiadiana ny Amboaran’ny Caf 2018.
Tsy mba menatra mihitsy ve e ?
Vita iny ny adihevitra nifanatrehan’ireo kandida filoham-pirenena roa hiatrika ny fihodinana faharoa ny alarobia 19 desambra izao.
Seha-pihariana fahatelo Afaka mampandroso tsara ny toekarena
Miankin-doha be amin’ny fambolena i Madagasikara kanefa 25,6% no mba ho entin’io sehatra io ao amin’ny harinkarena faobe (PIB).
GRENADY TENY MAHAMASINA
Nisy grenady hita tetsy amin’ny vavahadin’i Mahamasina omaly maraina.
Izay tokoa angamba no atao hoe faradoboka amin’ny fampielezan-kevitra aminy satria raha nangingina tao anatin’ny
Anosipatrana Nahavita tetezana ny zanak’i Dada
Nanaraka ny tenin’ny filoha Marc Ravalomanana ny Zanak’I Dada Anosipatrana dia ny miasa miaraka ny sabotsy 15 desambra teo.
Afera eny amin’ny sisiny Tsy misy akony amin’ny toekarena
Sahirana ny Malagasy ary mirongatra ny fanaovana bizina eny amin’ny sisiny rehetra eny. Maro tokoa aloha ny tokantrano velomin’ireny afera maro atao etsy sy eroa ireny saingy ny olana dia tsy miantraika mivantana amin’ny toekarenan’ny firenena izany.